Qurbuhu ma suuq qabiilka lagu gadaa?
SomaliNet Forum (Archive): RA'YIGA DADWEYNAHA - Your Opinion: Somalia: Archive (Before Nov. 8, 2000): Qurbuhu ma suuq qabiilka lagu gadaa?
<!-Post: 123329-!><!-Time: 973526470-!>
<!-Email-!><!-/Email-!><!-Name-!>Horn of Africa<!-/Name-!> Monday, November 06, 2000 - 06:01 am
<!-Text-!> Waqti dhow baan fursad u yeeshay la xiriirka Internetka. Waxaan ka xiiseeyaa wararka Soomaaliya, Qaybta Islaamka iyo Ra'yiga Dadweynaha.
Wararku ma xuma.
Qaybta Islaamku waa iska roon tahay oo wax waa ka helaysaa.
Laakiin, meesha lagu gubtey oo lagu gamaarey waa Ra,yiga Dadweynaha. Waxaan is weydiiyey, xagee dariishadeedu u faran tahay? Dadkani soo maahan intooda badani kuwii dibadaha ku noolaha, oo wax bartey, oo lagu dayen lahaa.
Dadka dalka ku nooli sidaan uga hadlaan oo iskuma caayaan qabiilka, ee su'aal iga hooya:
Qurbuhu(dibaduhu) ma suuq qabiilka lagu gadaa? <!-/Text-!>
<!-/Post: 123329-!> <!-Post: 123479-!><!-Time: 973541115-!>
<!-Email-!><!-/Email-!><!-Name-!>xabiib<!-/Name-!> Monday, November 06, 2000 - 10:05 am
<!-Text-!> Qof kasta oo dibbadda ku nool wax ma baran, kuwii wax bartayna Qabiilkii bay daba ku wataan, ee walaal waxaan kugula talin lahaa inaadan ka mid noqon kuwa halkan isku caaya. Haddii aad rabto inaad ka hadasho waxa ka taagan dalkeennii iyo sidii Somaaliya loogu heli lahaa xal isu wada keena oo qarannimada Somaliyana dib u soo celin kara inoo wad sheekada...
kuna soo dhawow internetka,,,
<!-/Post: 123479-!> <!-Post: 124146-!><!-Time: 973619611-!>
<!-Email-!><!-/Email-!><!-Name-!>Horn of Africa<!-/Name-!> Tuesday, November 07, 2000 - 07:53 am
Ugu horeyn, waxaan Soomaalida u sheegayaa in qabiiladoo dhan fiican yihiin. Sidoo kale qofkii qabiilkiisa ammaan la rabaa, ha ammaano kuwa kale.
Markaan intaas isla fahamno, waxaan ogaaneynaa in Soomaalidu tahay dad asal fiican, kana qeybqaadan karato oo ka badan karta dunida inteeda kale.
Qaabiilkeyga waxaa ammaan ugu filan in uu yahay islmaan dagana dhul Ilaahey, oo loo bixiyey Soomaaliya, sidaasna dunidu iigu taqaan Soomaali, waana ku faraxsanahay, waana ku faanayaa. <!-/Text-!>
<!-/Post: 124146-!> <!-Post: 124160-!><!-Time: 973620316-!>
<!-Email-!><!-/Email-!><!-Name-!>DARUURAHA<!-/Name-!> Tuesday, November 07, 2000 - 08:05 am
<!-Text-!> WAAN KU RAACSANEY SAAXIIBADEY ARINTA AH YAAN LACAAYIN QABIIL ,MIDAG,DIIN,DHADIG,LAB. <!-/Text-!>
<!-/Post: 124160-!> <!-Post: 124161-!><!-Time: 973620317-!>
<!-/Post: 124161-!> <!-Post: 124190-!><!-Time: 973622278-!>
<!-Email-!><!-/Email-!><!-Name-!>MALAAQ.G.C.<!-/Name-!> Tuesday, November 07, 2000 - 08:37 am
<!-Text-!> Maxaa runta u diidaysaa dawlad qabiila yaad samaysateen hadana waad qarinaysaan nacasnimada iska daaya oo qabiilku waa mabda qaali ah ee ha meel ha kaga dhicina.
Waxaan hubaa ninka meeshan ku qoray sheekadan in uu qabiil ka tiranyahay,in uu shirkii carta ee oday yasha qabaailku hogaaminayeen taageersanyahay.
in uu malinkasta la sheekaysto si gaar dad ay isku reer yihiin ogyahayna inta kursi ee laga siiyay dawlada cusub.
Wuxu bixiyaa qaaraanka reerkooda,dib u habaynta qabiilkooda talo iyo lacagba maantana wuxu iska dhigayaa nin aan qabiil aqoon
HADALAK WAXAAN KU SOO KOOBAYAA HADII AANU QABIILKAYGU MEESHA KA MUUQAN KALSOONIDII WAAN KALA NOQONAYAA ADEERKA.
waa hal hayska reeririhiina somaliyay waxaanse u baahanahay in la cilmiyeeyo oo la waafajiyo xaqa iyo diinta si uu qabiilku ugu horu maro.
HA NOOLADO QABIILKU. <!-/Text-!>
<!-/Post: 124190-!> <!-Post: 124382-!><!-Time: 973636572-!>
<!-Email-!><!-/Email-!><!-Name-!>Anonymous<!-/Name-!> Tuesday, November 07, 2000 - 12:36 pm
<!-Text-!> Malaaq G. C.
Xagee ka hadashey, yaase la hadleysaa?
Sheeg cidda aad u jawaabeysid, waayo kor kuma qorna in qabiilka la diido, ee waxaa ku qoran oo dadku ka hadleen in aan qabiil la caalin iyo wax la mid ah.
Mise waad ku soo qaldantay, oo meel kale baad jawaabta la dooneysid.
Haddii aad ku soo qaldantay, hadda jawaabtaada ka dhiibo, adoon careysneyn. Koleyse Anniga Shaati Gaduud iyo Qaasim waa ii Soomaali labaduba, ciddii siyaasad fiicanna waxay ku roontahay Ummadda Soomaaliyeed. <!-/Text-!>
<!-/Post: 124382-!> <!-End-!>